Guusha waxbarashada, welwelka, dhiirigelinta iyo u fiirsashada: maxaa runtii muhiim u ah in si wanaagsan looga qabto dugsiga? - Tababarka garashada
Halkan ayaad joogtaa: Bogga ugu weyn » Articles » waxbarashada » Guusha waxbarashada, welwelka, dhiirigelinta iyo u fiirsashada: maxaa runtii muhiim u ah in si wanaagsan looga qabto dugsiga?
Xirfadaha tacliinta waxay si weyn uga qeyb qaadan karaan suurtagalnimada helitaanka shaqo, hagaajinta xaaladda dhaqaale ee qofka iyo helitaanka waxbarasho heer sare ah. Xirfadaha dugsiga, akhris iyo xisaab iyagu waa kuwa saameyn ku leh ficil ahaan dhammaan heerarka nolosha ardayga. Daraasado dhowr ah ayaa isku dayay inay aqoonsadaan doorsoomayaal laxiriira guusha labadan aag.
Daraasad dhowaan la sameeyay, Geary iyo asxaabta (2020)  waxay baareen xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha kala duwan iyo xirfadaha akhriska iyo xisaabta ee koox ka kooban 315 ardayda dhigata fasallada labaad iyo saddexaad. Dhamaan kaqeybgalayaasha waxaa lagu qiimeeyay:
Imtixaanka IQ (Matricric iyo erayada Raven)
Imtixaannada la xiriira akhriska iyo xisaabta (hawlgallada tirada iyo imtixaannada akhriska)
Imtixaanada kale ee garashada (tirooyinka lambarrada, liisaska erayada la xafido, Imtixaannada koorsooyinka)
Intaa waxaa sii dheer, dhiirigelinta daraasadda (qiyaasta muhiimada mowduucyada la baranayo), walwalka xagga xisaabta iyo dabeecadda foojignaanta ayaa la baaray.
Sirdoonka (oo ay weheliso xusuusta shaqada) ayaa keentay halbeegga ugu muhiimsan ee saadaalinta xawaaraha iyo saxnaanta akhriska iyo xirfadaha xisaabta. Dabeecadda feejignaanta, dhanka kale, waxay umuuqataa inay door muhiim ah ku leedahay xisaabta marka loo eego akhriska. Fiiro gaar ah, ficil ahaan, waxay u horseedi kartaa barashada xisaabta oo gaabis ah. Fikrad kale oo ay qorayaashu yimaadeen ka dib markii ay falanqeeyeen xogta ayaa ah in xirfadaha goobaha ay kor u qaadi karaan waxtarka barashada xisaabta; sidoo kale, imtixaanada muuqaalka muuqaalka (sida imtixaanka Corsi) ayaa kaa caawin kara fahamka kala duwanaanshaha guusha xisaabeed ee u dhexeeya carruurta kala duwan. Xusuusta afka gaaban waxay u noqotay saadaaliyaha kaliya ee la xiriira akhriska (saxnaanta iyo xawaaraha), laakiin aan ku xirnayn xisaabta.
Xirfadaha garashada, u fiirsashada fasalka iyo xiisaha maadada ee maadada ayaa umuuqda kuwo isku dhow. Dhinac, feejignaan la aanta waxaa sababi kara xaqiiqda ah in ardeyga iskuulka dhibaatooyin ku qaba sida ugu dhaqsiyaha badan ama ka dib uu lumiyo xiisaha uu u qabo maadada; waliba, ardayda leh awooda garashada garashada sare waxay waqti badan galiyaan barashada iskuulka maxaa yeelay waxay leeyihiin dhibaatooyin kayar. Marka laga eego aragtidan, waxaa lagama maarmaan ah in maadooyinka laga dhigo kuwo xiiso badan oo si sahal ah loo fahmi karo si loo ilaaliyo dareenka ardayda; Waxaa la ogaaday in ardayda ay ku adagtahay xisaabta iyo akhriskuba ay khatar sare ugu jiraan inay la kulmaan dhibaatooyin waxbarasho iyo shaqo inta ay nool yihiin oo dhan.
Waxaa jira doorsoomayaal badan oo iswaafajin kara dhibaatooyinka tacliimeed (sida deegaanka uu qofku ku nool yahay, iwm.). In kasta oo ay jiraan xaddidaadyadan, daraasaddani waxay fureysaa aagag cusub oo cilmi-baaris ah oo lagu fahmayo dhibaatooyinka tacliimeed ee ka baxsan caddaynta fudud ee la xidhiidha barashada dugsiga.
Geary David C., Hoard Mary K., Nugent Lara, alnal Zehra E., Scofield John E., Comorbid Learning Dhibaatooyinka Akhriska iyo Xisaabta: Doorka Sirdoonka iyo Habdhaqanka Feejignaanta ee Fasalka, 11: 3138, 2020
attenzione, reading, xisaabta, dhiirogelin, guul waxbarasho
Guusha waxbarashada, welwelka, dhiirigelinta iyo u fiirsashada: maxaa runtii muhiim u ah in si wanaagsan looga qabto dugsiga?2020-12-212020-12-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/boys-286245_1280.jpg200px200px
Baaritaanka walwalka iyo cawaaqibkiisaBarashada, Maqaalka, Habdhaqanka, Habka Daraasada